အာဇာနည်မျိုးသေရိုးမရှိ: ဘာသာကိုးကွယ်တာနှင့် ဘာသာကာကွယ်တာမတူပါ။
(အစ္စလာမ်အကြောင်းကို ဗဟုသုတရလိုသူတိုင်း ဖတ်ဖြစ်အောင် ဖတ်ကြစေလိုပါတယ်။ဦးဘိုဘိုကျော်ငြိမ်းလို အမှန်တရားကို သတ္တိရှိရှိနဲ့ တိုင်းပြည်နဲ့လူမျိုးအကျိုးကိုရှေ့ရှု့ပြီး ရေးရဲတဲ့ နိုင်ငံရေးသမားတွေ၊ ပညာရှင်တွေ များများရှိစေချင်ပါတယ်။
အပိုင်း ၂ပိုင်းပေါင်းတင်ထားလို့ စာရှည်ပေမဲ့ အချိန်ပေးရကျိုးနပ်တဲ့ တန်ဖိုးရှိတဲ့ ဗဟုသုတရမှာဖြစ်ပါတယ်။ အချိန်ပေးမဖတ်နိုင်သူများ အပိုင်း(၂) ဗုဒ္ဓဘာသာကိုကာကွယ်ခြင်းကို ဖတ်ဖြစ်အောင်ဖတ်ပါ။ အပိုင်း ၂မှာ အစ္စလာမ်ဘာသာနဲ့ပတ်သတ်တာများကို ရှင်းလင်းစွာရေးသားဖော်ပြထားပါတယ်။
အကယ်၍..ပေါင်းစပ်ရာတွင် Fusion ဖြစ်လာက်အောင် ဒြပ်ထု (matter) မရှိခဲ့သော် (နေ) ကဲ့သို့သော (ကြယ်) ဘ၀မရောက်ပဲ Brown Dwarf ဟုခေါ်သော အရာ အဖြစ်သာ တည်ရှိနိုင်ပေသည်။(ကြယ်) ဖြစ်စဉ် တွင် မပါခဲ့သောအခိုးအငွေ့ နှင့် ဒြပ်ထုတို့သည် တဖန်…အသီးသီး …စုဝေးလာပြီး..ဂြိုလ်များ..ပေါ်ပေါက်လာ ကြပေသည်။ ထို့ကြောင့် သိပ္ပံပညာ မတိုးတက်စဉ်က ..Fusion ကြောင့် အလင်းရောင် ထုတ်နိုင်စွမ်းရှိသော (ကြယ်) များကိုသာမြင်နိုင်ကြပြီး…ယ္ခုမှအလင်းရောင်..မထုတ်နိုင်သော ဂြိုလ် (Planets) များတည်ရှိမှုကို တွက်ချက်မှုမှ သိရှိနိုင်လာကြပြီး..တချို့ကိုပင်..မြင်..နိုင်စွမ်းရှိလာကြရပေပြီ….
သဘာဝတရားအရ..(အချိန်)၏တိုက်စားမှုကြောင့်သာသနာပျောက်ကွယ်သွားသည့်ကာလများတွင်..သဘာဝတရားအရ..ကြင်လည်နေရသော သံသရာမှ မလွပ်မြောက်နိုင်ကြတော့ပေ။နောက်ဘုရားပွင့်မှနောက်ဘုရားက…ဤသဘာဝတရားများကိုပင်သိမြင်လာကာ….ဤသစ္စာ (၄) ပါးတည်းဟူသော တရား ကို ဟောကြားမှ ဗုဒ္ဓဘာသာတည်းဟူသော သစ္စ (၄) ပါးတရားတော်သည် တဖန် အသက်ရှင် လာရပေ တော့သည်။
အမှန်မှာဗုဒ္ဇဘာသာဆိုသည်မှာတကယ်လေ့လာလျှင်အလွန်သိမ်မွေ့သောသဘာဝတရားဖြစ်သည်။သို့သော်စာရေးသူ၏အမြင်အရဗုဒ္ဓဘာသာအတွက်အရေးအကြီးဆုံးသောအပိုင်းအစ(component) တစ်ခု..မှာ လုံးဝဥသုံသက်ဝင်ယုံကြည်မှု ConvincingTruth ဖြစ်သည်။
သိပ္ပံပညာသည်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဖြစ်ပျက်ပြောင်းလဲမှုများကိုလေ့လာတိုင်းထွာ..သုံးသပ်ခြင်းဖြင့် နားလည် နိုင်ပေသည်။ သို့သော်..စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဖြစ်ပေါ်ပြောင်းလဲမှုကို ယနေ့အထိတိုင်ခွဲခြားစိတ်ဖြာတိုင်းတာသိစွမ်းနိုင်စွမ်း..မရှိသေးခြေ။ ဗုဒ္ဓဘာသာ၏ အနှစ်သာရတစ်ခုဖြစ်သော (အဘိဓမ္မာ) တရားတော်သည်စိတ်ပိုင်း ဆိုင်ရာ အကြောင်းကို ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာဝေဖန်သုံးသပ်မှုပြုထားသော..အလွန်တန်ဖိုးရှိသော(တရားတော်)ဖြစ်ပေသည်။(စိတ်)၏ဖြစ်ပေါ်ပြောင်းလဲမှုသည်အလွန်မြန်ပေရာ..၀ိပသနာ.. တရား ကို ကျင့်ကြံအားထုတ်ခြင်းဖြင့်သာ..(စိတ်)ကိုထိန်းချုပ်နိုင်၍..(သမာဓိ) အားကောင်းလာသောအခါမှ သာ… (တရား) ကို (သိမြင်) လာနိုင်ပေသည်။
ဤသို့..တရား..ကို..သိမြင်..သည့်..အဆင့်.. ရောက်မှာသာ… လုံးဝဥသုံ..ယုံကြည်သည့် Convincing State ရောက်မှသာ..(အကုသိုလ်) (ကံ) ကိုဖန်ထီးသော (အကုသိုလ်) (အလုပ်) ..ကို မလုပ် ဆောင်တော့ပါ….ဤသို့..အဆင့်ဆင့်..ကျင်ကြံအားထုတ်ရင်း… Convincing အဆင့် (မြင့်) လာလေ.. မကောင်းမှု ..အကိုသိုလ်..မဖြစ်လေ..နှင့်..နောက်ဆုံး…သစ္စာ (၄) ပါးအားလုံးကို သိမြင်သွားသည့် အခါ …နောင်ဘ၀ကိုတွန်းပို့နေသော…(တဏှာ) (ပြတ်) သွားသည့် အခါ မှ…နောက်ဘ၀ဆက်ရန်..မရှိတော့သည့် အခြေအနေ (State) သို့ရောက်သွားသည့်.. အခါမှသာလျှင် …(နိဗ္ဗန်)သို့ရောက်ရှိရပေသည်။
စာရေးသူအသိဥါဏ်မှီသမျှ..နားလည်ရသည်မှာ…ဘ၀အဖုံဖုံ..ကြင်လည်နေရသော…သံသရာဝဋ်ဆင်းရဲမှ..လွပ်မြောက်ရန်..နောင်ဘ၀မရှိလောက်အောင်…Convincing truth ကို(သိ)ရှိ(နားလည်)..(ယုံကြည်)သော(အဆင့်)(State) သို့ရောက်ခဲ့သည်ရှိသော်…လုံးဝ..(အေးချမ်းမှု) ကိုရရှိကာ…ဆက်ခါဆက်ခါ. .ဘ၀မျိုးဆုံ ဖြစ်ပေါ်နေရသော (process) (ရပ်) သွားသော ..(State) ကိုရောက်ခြင်း..တနည်းအားဖြင့် (တဏှာ) ပြတ်နိုင်သည့် နောက်ဆုံး State ကိုရောက်သွားသောသူ ၊ သံသရာ လည်ပတ်မှု (process) (ရပ်) သွားသောသူ ကိုမှု (နိဗ္ဗန်) ရောက်သူဟု ခေါ်ဆိုပါသည်….
ထို့ကြောင့်ဗုဒ္ဓဘာသာ၏(နိဗ္ဗန်)ဆိုသည်မှာ..ဖန်ဆင်းရှင်..တန်ခ်ိုးရှင် ကို ယုံကြည်ကြသော ဘာသာများ၏ (နိဗ္ဗန်) (Heaven) နှင့် (ကွာခြား) သည်ဟုဆိုနိုင်ပေသည်။ ထိုထိုသော ဘာသာတို့တွင် စာရေးသူနားလည် သမျှ ဆိုပါလျှင် ၎င်းတို့၏ (နိဗ္ဗန်)ဆိုသည်မှာထာဝရသာယာပျော်ရွှင်ဖွယ်ကောင်းသော(Eternal Paradise) ဖြစ်ပေသည်။
ဤသာယာပျော်မြူးဖွယ်ကောင်းသော(နိဗ္ဗန်)သို့ရောက်ရန်မှာထာဝရဘုရားသခင်၏(အလို)သာဖြစ်သည်။ထို့ကြောင့်ထိုထိုသောဘာသာတို့သည်(ငါ့ဘုရား)..(ငါ့ဘာသာ) ဟူသော (ငါ) ကို (အခြေပြု) သော (ငါ) ဘာသာများဟုဆိုချင်သည်။
ဘယ်ဘာသာမှ..ဘုန်းတြော်ကီးတွေ..တိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်နေသောဘာသာ..ရှိပါသလဲ…အီရန်နိုင်ငံနိုင်ငံမှာမွတ်စလင်ဘုန်းတော်ကြီးများသည်….သက်ဦးဆံပိုင်အာဏာရှင်များဖြစ်၍… အာရာတိုလာရပ်ဆင်ဂျာနီဆိုလျှင်သမ္မတနှစ်ခါလုပ်လိုက်သေးသည်။ဆော်ဒီတွင်ဝဟာဗီ တရားရေးဆရာကြီးများကဆော့ဒ်မျိုးဆက်ဘုရင်အဆက်ဆက်ကိုအားပေးထောက်ခံရင်း..အလွန်တင်းကြပ်အစွန်းရောက်သောဝဟာဗီ(Wahhabi) ဘာသာရေးအယူဝါဒကိုဓါးမိုးကာထန်းသိမ်းနိုင်ခဲ့သည်။ထို့ပြင်တကမ္ဘာလုံးရေနံဒေါ်လာသုံး၍၀ဟာဗီအတွေးအခေါ်ကိုဖြန့်နိုင်ခဲ့သည်။တကမ္ဘာလုံးဆော်ဒီရေနံဒေါ်လာများဖြင့်..ပလီတွေ အနှံ့ဆောက်လျှက်ရှိ သည်။
အဆိုးဆုံးဥပမာမှာအာဖကန်မှာတာလီဖန်တွေကြီးဆိုးစဉ်ကမိုလာအိုမာသည်သက်ဦးဆံပိုင်အာဏါရှင်အဖြစ်အုပ်ချုပ်ရုံမက..၎င်း၏အမိန့်နှင့်..နှစ်ပေါင်း ၂၀၀၀ ကျော်တည်ရှိခဲ့သော ဗုဒ္ဓရုပ်ပွားတော်များကိုမိုက်မိုက်ကန်းကန်း..ဒိုက်နမိုက်ဖြင့်..ဖျက်စီးခဲ့ကြသည်။ ဘာသာရေးပုလိပ် များက မိန်းကလေးများကိုလိုက်ရိုက်နှိပ်ကွပ်ကြသည်မှာလည်းအာဖကန်ကဆော်ဒီပုံစံပုံဖေါ်ခြင်းသာဖြစ်သည်။တကယ်တော့အစ္စလမ်ဘာသာသည်အစ္စလမ်ဘာသာရေးဆရာတွေပြောတာနားထောင်၊အာလုံးလိုက်နာ၊မလိုက်နာလျှင်သတ်မည်ဖြတ်မည်လည်လှီးမည်ဆိုသော(အဓမ္မ)ဘာသာဖြစ်သည်ဆိုသည်ကိုမည်သူမှမငြင်းနိုင်ပါ။
ယနေ့အီဂျစ်နိုင်ငံတွင်အာါဏါရရှိလျှက်ရှိသောMuslim Brotherhood ကိုစတည်တည်ထောင်ခဲ့သူသည်ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အတွင်းက၀င်ရိုးတန်းနိုင်ငံများနှင့်မဟာမိတ်ပြုခဲ့ရုံမကဟစ်တလာနှင့်အတူနာဇီယူနီ ဖေါင်းဝတ်၍၀င့်ကြွားခဲ့ဖူးသည်။နာဇီတွေယုံတာကအာဏါရှင်စနစ်၊အစ္စလမ်ဘာသာကျင့်သုံးတာကလည်းအာဏါရှင်စနစ်..သူတော်ချင်းချင်းသတင်းလွေ့လွေ့၊လာပေါင်းမိနေကြသည်။
အစ္စလမ်ဘာသာသည်တခြားဘာသာခြားများကိုမပြောနှင့်၊မိမိတို့ဘာသာအချင်းချင်းတွင်ပင် ၊စူနီများကရှီရာများကိုသူရဲကောင်းကိုးကွယ်သူတွေ၊အစ္စလမ်စစ်စစ်မဟုတ်ဟု၊အသိမှတ်မပြုရုံတွင်မက၊ယနေ့ပါကစ္စတန်တိုင်းပြည်တွင်စူနီလူများစုများကရှီရာလူနဲစုကိုသတ်ဖြတ်လျှက်ရှိပြီး၊အစိုးရကလျစ်လျူရှုလျှက်ရှိသည်။လူနဲစုခရိယန်ဘုရားရှိခိုးကျောင်းများကိုဗုံးဖြင့်ပစ်၊စက်သေနတ်ဖြင့်ပစ်ရစရာမရှိအောင်ဆော်ကားအဓမ္မပြုကျင့်လျှက်ရှိသည်။ယုတ်မာပက်စက်သူများမှာISI ဟုခေါ်သောပါကစ္စတန်စစ်ထောက်လှမ်းရေးမှမွေးထားသူများဖြစ်သဖြင့်လွပ်လွပ်လပ်လပ်လူများစုကလူနဲစုကိုအနိုင်ကျင့်နိုင်ခွင့်ရှိကြသည်။
ပါကစ္စတန်နိုင်ငံတွင်းကိုမဆိုထားဘိ၊အိန္ဒြိယနိုင်ငံ ထွန်းထွန်းပေါက်ပေါက်တိုးတက်လျှက်ရှိသည်ကို မနာလိုဝန်တိုစိတ်ဖြင့်မွပ်စလင်ဘာသာရေးအကြမ်းဖက်ဂိုဏ်းကအိန္ဒြိယနိုင်ငံမွန်ဘိုင်မြို့သို့ အကြမ်းဖက်သမားများစေလွှတ်၍အပြစ်မဲ့သူပြည်သူများကိုသတ်ဖြတ်ခဲ့ကြသည်။ ဂျူးရာဘိုင်လင်မယားကိုတမင်ရှာကာသတ်ဖြတ်ခဲ့ကြသည်။ဤမျှယုတ်မာသောဘာသာရေးအကြမ်းဖက်သူများ၊ မွတ်စလင် ဘာသာဝင်များ မှလွဲ၍ မည်သည့်ဘာသာတွင်ရှိပါသနည်း။
စူနီများသာမဟုတ်။ရှီရားများကလည်း၎င်းတို့လူများစုရှိရာနိုင်ငံများတွင်၎င်း၊လူနဲစုပင်ဖြစ်လင့်ကစားအာဏါရထားသောနိုင်ငံများတွင်စူနီများနှင့်အခြားအစ္စလမ်ဂိုဏ်းခွဲများကိုရက်ရက်စက်စက်နှိပ်ကွပ်လျှက်ရှိသည်။ရှီရာအကြီးဆုံးနိုင်ငံဖြစ်သောအီရန်နိုင်ငံတွင်..စူလဖီများကို ရက်ရက်စက်စက် နှိပ်ကွပ် လျှက် ရှိဆဲ။ယနေ့ ဆီရီးယားတွင် ရှီရာအနွယ်ဝင် အာလ၀ိုက် (Alawites) များကအာဏါသိမ်းထားရာ ပုန် ကန် နေသော စူနီများကို လူမဆန်စွာနှိပ်ကွပ်လျှက်ရှိသည်။အဘယ်ကြောင့်နည်း။အကယ်၍အာလ၀ိုက်များရှုံးခဲ့သည်ရှိသော၎င်းတို့လည်းရက်ရက်စက်စက်အသုတ်သင်ခံရမည်ကိုအစ္စလမ်ဘာသာဝင်အချင်းချင်းသိသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ဆီးရီးယားပြဿနာသည်တကယ်တော့စူနီ-ရှီးရာ ပဋိပက္ခ ပင်ဖြစ်သည်။
ဆူဒန်နိုင်ငံတွင်မြောက်ဖက်မှအာရပ်များသည်တောင်ဖက်ပိုင်းမှခရိယန်များကိုမတရားသတ်ဖြတ်ရုံမက၊ကျွန်အဖြစ်ပါခိုင်းစား၊ရောင်စားလိုက်ကြသေးသည်။နိုင်ဂျီးရီးယား(Nigeria) တွင်အစ္စလမ်အကြမ်းဖက်သမားများသည်ခရိယန်ဘုရားရှိခိုးကျောင်းများအတွင်းသို့လက်ပစ်ဗုံးများပစ်၊စက်သေနပ်များဖြင့်ပစ်ခြင်းများပြုလုပ်နေသည်မှာမကြာခဏပင်။ဤသို့ကိစ္စများတွင် OIC မှဝင်အပြော။
တချိန်ကခရိယန်ဘာသာသည်လည်း…အမှောင်ထုအတွင်းသို့..ကျရောက်ခဲ့ဖူးသည်။ ခရိယန်ဘုန်းကြီးများ သည် ဘာသာရေးအကြောင်းပြလျှက်ဘာသာမတူသူများကိုရက်ရက်စက်စက်သတ်ဖြတ်အတင်းအဓမ္မဓါးမိုးအုပ်ချုပ်ဖူးခဲ့ကြသည်။မိန်းမတချို့ကိုစုန်းမဟုစွပ်စွဲကာအရှင်လတ်လတ်မီးတင်ရှို့ခဲ့ကြသည်။ထို့ကြောင့်အင်္ဂလိပ်စကားမှာ(witch hunt) ဆိုသည်ပင်ပေါ်ပေါက်ခဲ့ရသည်။Dark Age ကာလက ဘာသာရေးက အဓမ္မ ဓါးမိုးဖုံလွှမ်းထားသဖြင့်စာပေကအစဘာမှမရှင်သန်နိုင်ခဲ့ကြ။ပြန်လည်ပွင့်လင်းရှင်သန်လာသောRenaissance ခေတ်ရောက်မှ အားလုံးပြန်လည်ပွင့်ဖူးခဲ့ကြရသည်။
တချိန်က ခရိယန်ဘုန်းကြီးတွေ သောင်ကျန်း ခဲ့သလို..ယနေ့အစ္စလမ် ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်အများစုသည်ဝဟာဖီတို့၏ဦးဆောင်မှုနောက်လိုက်ကာအဓမ္မနည်းဖြင့်အစ္စလမ်ဘာသာပြန့်ပွားရေးကိုအကြမ်း ဖက်နည်းဖြင့်ဖေါ်ဆောင်ချင်ကြသည်။
ယနေ့၂၁ရာစုခေတ်၊ဒီမိုကရေစီထွန်းကားတိုးတက်နေသည့်ခေတ်ကြီးတွင်တခြားဘာာများသည်နိုင်ငံရေးနှင့်ဘာသာရေးခွဲခြားနေချိန်တွင်အစ္စလမ်ဘာသာတခုထဲသာနိုင်ငံရေးနှင့်ဘာသာရေးကိုရောထွေးလျှက်ရှိသည်ဟုဆိုနိုင်ပါသည်။အစ္စလမ်ဘာသာဝင်များသည်သူတို့လူနဲစုဖြစ်သောနိုင်ငံများတွင်မိမိတို့အစ္စလမ်ဘာသာဝင်တို့၏ယဉ်ကျေးမှုကိုအတင်းအဓမ္မထူထောင်ကြသည်။ဥပမာမိန်းမများလုံးဝဥသုံခေါင်းပူးခြုံစေ၍ယေက်ျားများမှာမုဆိတ်မွှေး၊ပသိုင်းမွှေးအရှည်ကြီးများထားကာမွတ်စလင်ဝတ်ဆုံများကိုဝတ်၍အစ္စလမ်ယဉ်ကျေးမှုကိုဖေါ်ဆောင်ကြသည်။အစ္စလမ်အများစုကြီးစိုးသောနိုင်ငံများတွင်မူလူနဲစုဘာသာနှင့်ယဉ်ကျေးမှုကိုလုံးဝသည်းညည်းခံခြင်းမရှိရုံမကဘာသာရေးဖိနှိပ်မှုကိုကျူးလွန်လျှက်ရှိကြပါသည်။ဥပမာအီဂျစ်မှာကောတစ်ခရိယန်များကိုMuslim Brotherhood အစိုးရတက်လာသည်နှင့်ဖိနှိပ်မှုများ၊များပြားလာသည့်အတွက်ကောတစ်ခရိယန်ဝင်များအီဂျစ်မှထွက်းပြေးတိမ်းရှောင်နေကြရသည်မှာယနေ့အထင်အရှားဖြစ်သည်။ပါကစ္စတန်နိုင်ငံတွင်လူနဲစုခရိယန်ဘုရားရှိခိုးကျောင်းများအတွင်းဝင်၍သေနပ်ဖြင့်ပြစ်ချင်း၊ဗုံးဖေါက်ခြင်းများမှာမကြာခဏပင်ဖြစ်သည်။နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်ငံတွင်လည်းထို့နည်း၎င်းပင်အစ္စလမ်ဘာသာဝင်အကြမ်းဖက်သမားများကခရိယန်များကိုသတ်ဖြတ်လျှက်ရှိသည်။
အစ္စလမ်သာသနာကြီးစိုးသောနိုင်ငံများတွင်ဘာသာကိုစော်ကားသူအား သေဒဏ်အထိ အပြစ်ပေးနိုင်သော Blasphemy Lawဆိုတာရှိသည်။ ပါကစ္စတန်နိုင်ငံတွင် အစ္စလမ်ဘာသာရေးဆရာတဦးက ၊ ကြပ်မပြည့် သော အရွယ် မရောက်သေးသော ခရိယန်ရောဂါ သည်ကလေးကို လုပ်ကြံ၍တိုင်တည်သောကြောင့်ပုလိပ်ကဖမ်း ကာ အရေးယူသဖြင့် ကမ္ဘကျော်ခဲ့သည်။ နောက်ဆုံး လည်ဆည်တိုင်တည်တာပေါ်သွား၍ သူငယ်မကလေး မှာ လွပ်မြောက်သွားသော်လည်း ၊ လိမ်လည်တိုင်းတန်းသူ ဘာသာရေးဆရာကို အရေး ယူသည်ဟု မကြား မိ။ ယနေ့ ၂၁ရာစုခေတ်ကြီးတွင် ဤသို့အရေးယူသော ဘာသာ အစ္စလမ်မှလွဲ၍ရှိပါတော့သနည်း။ ဥပဒေရှိရုံမက ၊ လိုက်နာကျင့်သုံးမှု ကိုဆိုလိုပါသည်။
ပေးပို့တင်ပြသူ အာလူးလေး at 9:09 AM Email This BlogThis! Share to Twitter Share to Facebook